IHE M GA-ABỤ N’ỌDỊNỊHU | Igboniile
Ekele diri Chukwu onye mere ka m bụrụ nwata a mụpụtara n‘oge agụmakwụkwọ bụ ihe nwoke na nwaanyị ji anya isi. Ihe m jiri sị ka otito dịrị Chineke bụ na ihe ọ bụla mmadụ nwere ike ịbụ n’ọgbọ a ga-esirịrị n’agụmakwụkwọ nweta ya. Ọ bụ mmụta ga-eme ka mmadụ nwee ike ịhazi ma gosipụtakwa ọrụ ahụ nke ọma. E nwere ọtụtụ ihe bara uru mmadụ nwere ike ịbụ site na mmasị nke ya dịka dọkịnta, onye ọrụ ugbo, ịzụ ahịa, nkanụzụ, ode akwụkwọ, ịdụ na maọbụ ịkwa akwa, ịmụ ọrụ aka dị iche iche dgz. ihe niile ndị a dịchasị mma, mana ọ ga-amasị m ịbụ Ọkammụta asụsụ Igbo.
Tupu m gawa n’ihu ịkọwapụta ihe m jiri nwee mmasị ịbụ Ọkammụta asụsụ Igbo, ọ ga-amasị m ikọwapụta ihe Ọkammụta bụ n’ihi na a chọwa anya anụ, a gaa n’isi ya. Ọkammụta bụ onye nkụzi e nwere n’ụlọakwụkwọ dị elu. E nwere Ọkammụta na ngalaba agụmakwụkwọ dị iche iche dịka Ọkammụta na nka, Ọkammụta n’asụsụ bekee, Ọkammụta n’ asụsụ dị iche iche dgz.
Asụsụ Igbo dịka otu n’ ime ihe ọmụmụ ndị m mụrụ n’ụlọakwụkwọ primari n’Akwuazi Secondary School, bụ ihe m nwekarịsịrị mmasị na ya. Ya mere m jiri kpebie ịbụ Ọkammụta asụsụ Igbo n’ọdịnihu ebe ọ bụ na agadị nwaanyị anaghị aka nka n’egwu ọ maara agba. Achọrọ m ịbụ Ọkammụta asụsụ Igbo iji nye aka n’ikwalite asụsụ na omenaala ndị Igbo. Dịka anyị siri mara, asụsụ Igbo abụrụla ihe dara ada. Ụmụ Igbo ahọrọla ịsụ bekee dịka asụsụ ha; bịa n’ala asụsụ ha nwere dịka ndi Igbo n’iyi. Ndị Igbo tụrụ ilu sị na onye jọrọ njọ na-eme ngala ọ dịka ọ na-esi ọnwụ. Omenaala Igbo dịka iti mmọnwụ, ịbọ ụzọ, iri ji ọhụrụ na egwu ọdịnaala Igbo abụrụla ihe e chefuru echefu. Ọ ga-amasị m inye aka n’ikwalite ha. Echere m na mụ onwem isonye dịka otu n’ ime ndị Ọkammụta e nwere n’ asụsụ Igbo ga-enye aka ma wetakwụazi mgbanwe na ndụ ndị Igbo.
Ihe ọzọ m chọrọ inweta dịka Ọkammụta n’asụsụ Igbo bụ inye aka n’ịkwalite ọnọdụ agụmakwụkwọ ndị Igbo n’obodo a bụ Naijiria. A bịa n’ọkwa gọọmenti, a na-eleda ndị Igbo anya. N’ime mmadụ iri a ga-ahọrọ n’ọkwa ọchịchị, naanị otu onye ga-esi n’agbụrụ ndị Igbo. Ihe dị otu a jọgburu udele ma sigbuo nkapị, ka anyị matakwa na a naghị ahapụ isiaka agba ụrịọ.
Ọzọkwa, n’ihe niile mmadụ nwere ike ịbụ, naanị ọrụ nkụzi bụ ihe ka enye mmadụ ohere, ọkachasị ụmụnwaanyi. Ọ ga-amasi m ịgbaziri ndị na-eto eto ụzọ maka ọdịnịhu banyere omenala n’asụsụ Igbo, n’ihina ọkụkọ hapọ kwọm, o nweghi ihe ọzọ ọ ga-eji zụ ụmụ.
Ọ bụrụkwụazi na Chineke gozie mbọ niile m na-agba, ọ ga-abụrụ m nnukwu ihe oṅu imepe nnukwu ọba akwụkwọ Igbo (Igbo Library), n’obodo a bụ Naijiria. Ọba akwụkwọ a ga-abụ ebe a ga na-eme asompi n’etiti ndị ntorobia ala anyị. Ama m na ọ ga-enyekwụazi aka ịkwalite ọnọdụ agụmakwụkwọ n’ ala Igbo.
N’ikpeazụ, ekpere m bụ ka Chineke nyere m aka imejupụta ihe m chọrọ ịbụ n’ọdịnịhu site na mbọ m na-agba, n’ihi na ọ bụ onye bara ọhịa ka ọhịa na-ezo.